‘विदेशको परिवर्तित शिक्षा नीति बुझ्न एक्स्पर्ट फेयर विद्यार्थीलाई फलदायी हुनेछ’ – Arthik Awaj
‘विदेशको परिवर्तित शिक्षा नीति बुझ्न एक्स्पर्ट फेयर विद्यार्थीलाई फलदायी हुनेछ’
रमेशकुमार थापा, प्रवन्ध निर्देशक, एक्स्पर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेस पोखरा
By आर्थिक आवाज २०७८ चैत्र ९ गते बुधबार ०९:१६ मा प्रकाशित
एक्स्पर्ट एजुकेसन एण्ड भिजा सर्भिसेस पोखराको आयोजनामा चैत १२ गते (मार्च २६) शनिबार पोखरामा बृहद शैक्षिक मेला हुने भएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ‘एक्स्पर्ट ग्राण्ड एजुकेशन फेयर–२०२२’ हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा फेयरसँग सम्बन्धित रहेर एक्स्पर्ट पोखराका प्रवन्ध निर्देशक रमेशुकमार थापासँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
पोखरामा एक्स्पर्ट ग्राण्ड एजुकेशन फेयर आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो समय कोभिड लगायतका कारणले विदेशको शिक्षा नीतिमा परिवर्तनसमेत आएको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीले परिवर्तित नीति नियमहरुका बारेमा पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा जो विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जान चाहन्छन् उनीहरुलाई परिवर्तित परिस्थिति लगायत विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जानकारी विद्यार्थीलाई गराउन नै फेयर आयोजना गरिएको हो ।
कुन-कुन देशलाई लक्षित गरी फेयर गर्दै हुनुहुन्छ ?
अष्ट्रेलिया, क्यानडा, युके र युएसएलाई लक्षित गरी फेयर आयोजना गरेका हौं । यी चारवटै देशमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरु फेयरमा आउन सक्छन्् ।
फेयरमा कति वटा युनिभर्सिटी तथा कलेजका प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन् ?
विदेशका प्रतिष्ठित युनिभर्सिटी तथा कलेजलाई हामीले फेयरमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदैछौं । विभिन्न देशका २५ भन्दा बढी युनिभर्सिटी तथा कलेजका प्रतिनिधिहरु फेयरमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनेछन् ।
फेयरमा आउने लक्षित विद्यार्थी को–को हुन्छन् ?
प्लस टु तथा ब्याचलर उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी फेयर आयोजना गरिएको हो । पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको फेयरमा उपस्थिति रहनेछ ।
एक्स्पर्टकैै फेयरमा विद्यार्थी किन आउने ?
एक्स्पर्टद्वारा आयोजना हुने फेयरमा प्रतिष्ठित युनिभर्सिटी तथा कलेजका प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ । विद्यार्थीले युनिभर्सिटी तथा कलेजका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेट्ने अवसर प्राप्त गर्नुका साथै सत्य तथ्य जानकारी लिने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।
एक्स्पर्टमार्फत विदेश जाँदा विद्यार्थीलाई के फाइदा हुन्छ ?
शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरु मध्येमा एक्स्पर्ट अग्रणी पहिचान बनाउन सफल संस्था हो । यसको प्रधान कार्यालय अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा छ भने अष्ट्रेलियामा अन्य १४ वटा शाखा छन् । १३ वटा देशमा ४७ वटा शाखा सञ्जाल छ । हामीले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने काम मात्रै गर्दैनौं । विदेश गइसकेपछि पनि विद्यार्थीलाई त्यहाँको वातावरणमा स्थापित गराउन तथा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने गरेका छौं । एक्स्पर्ट मार्फत विद्यार्थी निर्धक्कसँग विदेशमा अध्ययनका लागि जान सक्छन् ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम कस्तो छ ?
कोभिड महामारीको समयमा सबै क्षेत्रमा असर पर्यो । त्यसबाट विदेशमा अध्ययन जाने क्रममा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वभाविक थियो । पछिल्लो समय यो व्यवसायमा सुधार आउने क्रम जारी छ । विदेश जाने विद्यार्थीको माग पनि बढिरहेको छ । आगामी दिन अझै उत्साहप्रद रहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
हामीले विगतका वर्षहरुमा जस्तै गरी यस वर्ष पनि फेयर आयोजना गरेका छौं । पोखराको न्युरोडस्थित सिटी स्क्वायरमा हुने फेयरमा सहभागी विद्यार्थीलाई फ्रि प्रोसेस गर्नेछौं । सहभागीलाई हामीले आकर्षक पुरस्कारहरुको व्यवस्थासमेत मिलाएका छौं । बिहान ११ देखि साँझ ४ बजेसम्म फेयरमा उपस्थित भएर अहिलेको परिवर्तित नीति, नियमहरुको बारेमा सही परामर्श लिन म सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आग्रह गर्दछु ।